CIN Khabar आइसोलेसन बेड भरिंदै, अब घरमै हुन्छ सङ्क्रमितको उपचार
आइसोलेसन बेड भरिंदै, अब घरमै हुन्छ सङ्क्रमितको उपचार जनशक्ती भर्ना लगाएत तयारी गरिरहेका छौंः स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावत
सीआईएन सोमबार, जेठ १९, २०७७, १२:२६:००
घरमै बसेर सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, हाम्रो जनशक्ती परिचालन गर्छौं ।
अस्पतालमा उपचारका लागि बेड भरिएपछि थपिएका संक्रमितलाई अब कसरी उपचार गर्ने ? सिंगो सरकार लागि समस्या खडा हुँदैछ । संक्रमणको गति र सरकारको तयारी बीच कतै पनि तालमेल देखिएको छैन । अब सरकार कसरी अगाडी बढ्छ ? राजन रुचालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग गर्नुभएको कुराकानी ।
तपाईहरु बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन् गर्ने बारेमा छलफल गर्दैहुनुहुन्छ ?
हामी अहिले, तल्काल नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) खोल्ने अवस्थामा त छैनौं । तर लकडाउनको यो परिवेशलाई अलि केही फरक ढंगले सोंच्नु पर्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ । समय अनुसार अथवा ठाउँ विशेष अनुसार केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि, भन्ने हो, तर हामी टुंगोमा पुगेका छैनौं । हाम्रो विज्ञ टोलीसँग छलफल चलिरहेको छ । केही न केही फेरबदल हुने सम्भावना छ ।
तपाईले भनेको बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तको कुरा चाँही २० गतेबाट हो अर्थात् बन्दाबन्दीको समय बढाएकाले ३२ गतेबाट हुने हो ?
यतिबेला तपाई मार्फत, सीआईएन सुनिरहनु भएका दाजुभाई तथा दीदिबहिनीलाई के भनौं भन्दा, अहिले नै यो हो भनेर हामी भन्ने अवस्थामा छैनौं । त्यो छलफल हुन्छ, अनि ३२ गते पछि पनि हुनसक्छ, २० गते पछि पनि हुनसक्छ । तर प्रयाप्त मात्रामा छलफल गरेर नागरिकलाई सबै कुराको सूचना दिएर मात्र हामी गर्ने तहमा छौं ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीले बन्दाबन्दी गर्यौं, तर परीक्षणको दायरा बढाउन सकेनौं, भनेर विज्ञहरुले पनि भनिरहेका छन्, र आम सर्वसाधारणको गुनासो पनि त्यही हो । तपाई स्वीकार्नुहुन्छ ?
नागरिको गुनासो हुनु स्वभाविक छ अथवा विज्ञ डाक्टरहरुको गुनासो हुनु स्वभाभिक छ । तर दिनरात सरकारको सम्पूर्ण शक्ति, कोरोनाका विरुद्धमा नै केन्द्रीत छ । हामी यो अभियानमा जुटेका छौं । अब तपाईले अर्को प्रश्न पनि सोध्नु होला, कि बढेको बढै छ भनेर । यो बढ्नुको कारण नेपालमै सबै देखा पर्ने भन्दा पनि तमाम नेपाली नागरिक हाम्रा दाजुभाईहरु भारतबाट आउने क्रम जब बढ्यो त्यसकारणले यसमा बृद्धि भएको छ । हामीले अहिले तमाम ठाउँमा पीसीआर लगाएतका टेष्ट गर्ने काम अगाडी बढाउँदा बढाउँदै घटनाक्रमहरु पनि त्यत्तिकै भएका छन् । खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाईका कारणले उतैबाट कोरोना संक्रमित भएर आएर हाम्रो देशमा यो संख्या बढेको छ । अहिले १ लाख २० हजार भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसीरहनु भएको छ त्यही हिसाबले हामीले सामाग्रीहरु पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।
संसारभरी नै कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ, नेपालमा पनि बढ्यो त्यसलाई हामीले अस्वभाविक रुपमा नलिउँ तर बढेको त्यो सङ्क्रमितको संख्यालाई आईसोलेसनमा राख्नको लागी हामीसँग प्रयाप्त आईसोलेसन बेड त छैन । जम्मा एक दुई सय मात्र बाँकी छ के हो त सरकारले गर्ने चाँही ?
तपाईले बढो महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । अब अहिले विश्वका विकसित राष्ट्रका परिस्थिति बारे पनि तपाईहरु मिडियाका लगाएत सबै विज्ञहरु र नागरिकहरुलाई थाहा छ । हाम्रो परिवेश के होला, हामी कसरी जाने होला ? आइसोलेसन नहुँदा हामीले के गर्ने होला भन्ने कुरा कतिपय छिमेकी देशबाट पनि सिक्नुपर्छ । कतिपय विकसित राष्ट्रबाट पनि सिक्नुपर्छ ।
त्यो भनेको सङ्क्रमितहरुलाई घरमै क्वारेन्टाईन्मा राख्ने भन्ने हो ?
हो, अब विस्तारै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो, ३/४ हजार पुग्दै गयो, अथवा ५/७ हजार पुग्दै गयो भने हामी त्यसो पनि गर्न सक्छौं । त्यसकारणले हामी अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ साथीहरुसँग यो विषयमा दुई तीन दिन बिराएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । भोलि होम क्वारेन्टाईनमा बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । घरमै स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्ने व्यवस्था पनि हुनसक्छ । त्यस्को तयारी हामी गरिरहेका छौं ।
यदी हामीले भोलीको दिनमा घरमै राखेर कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने स्थिती आयो भने, त्यस्तो तयारी गरीराखेका छौं भने, सबै सङ्क्रमितको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी पुराउन सकिन्छ ?
स्वास्थ्यकर्मी त हामीले कतिपय ठाउँमा अहिले नयाँ भर्ना गर्ने काम पनि जारी राखेका छौं । नेपालको जनशक्ति जे खालको छ त्यसले गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीसँग अहिले अनुमान गरेको जति जनसङ्ख्या सङ्क्रमित हुँदा पनि, उपचार गर्न सक्ने क्षमतावान स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ । अहिले नै हामी गर्न सक्दैनौं भन्ने भन्दा पनि हाम्रा संरचना र जनशक्तीलाई विश्वास गरौं । उस्तै पर्दा हामी स्थानीय तहलाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिएर केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले त्यस्ता कामहरु अगाडी बढाउछौं । अभियानकै रुपमा हामी लागिरहेका छौं, लाग्छौं ।
कोरोनासँग सम्बन्धित रोगलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसका विरुद्धमा लागिरहन अर्थमन्त्रीले त्यत्रो बजेटको प्रस्ताव गर्नु भएको छ । काम त अगाडी बढ्छ नी नेपाल सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विश्वास नगरेर गर्ने कस्लाई ?
कोभिडको उपचार गर्नका लागी भनेर छुट्टाईएको अस्पतालमै पुगेका, आईसोलेसनमा बसेका मान्छेहरु त, सेवा सुविधा पाएनौं भनिरहेका छन्, अब घरमै भएका मान्छेलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिएला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
म एउटा प्रतिनिधीका हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीका हिसाबले के भनौं त भन्दाखेरी हाम्रो प्रयत्नहरु भईरहेका छन् । घरमै बसेर सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, हाम्रो जनशक्ती परिचालन गर्छौं । संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, त्यो अभियानमा छौं । केन्द्र सरकारको मात्रै बलबुुताले भ्याएन भने, हामी तीनै तहका सरकारहरु बीच समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्छौं । त्यो अभियानमा जुट्छौं ।
आइसोलेसनको कुरा गर्दा, १६ सय २४ जना भन्दा बढिलाई राख्न सक्ने क्षमता छैन । क्वारेन्टाइनमा १ लाखको हाराहारीमा मान्छे राख्यौं, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हाम्रो स्थिती कस्तो बनेको छ देखिएकै छ । क्वारेन्टाइन त झन् कोरोना सार्न जाने ठाउँ र मृत्यू हुने ठाउँ जस्तै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कसरी विस्वास गर्ने नागरिकले ?
विश्वास त गर्न पर्यो नि । हामी हाम्रो अभियानमा जुटेका छौं १६ सयको ठाउँमा ३२ सय बनाउने कुरा गरेका छौं । अहिलेको बजेटले सम्बोधन पनि गरेको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित रोगलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसका विरुद्धमा लागिरहन अर्थमन्त्रीले त्यत्रो बजेटको प्रस्ताव गर्नु भएको छ । काम त अगाडी बढ्छ नी नेपाल सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विश्वास नगरेर गर्ने कस्लाई ?
अहिलेको अवस्थामा कोरोना धेरै फैलिनुमा, सङ्क्रमण धेरैमा देखिनुमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएर हो भनेर विज्ञहरुले भनेका छन् । यो तथ्यलाई नकार्न मिल्छ ?
कस्ले के भन्छ भन्दा पनि, कतिपय सन्चो भएर पनि त गएका छन् नि । क्वारेन्टाइनबाट १४ दिन २१ दिन कटाएर हामीले उपचार गरेर निको बनाएर पठाएका पनि त छौं नि । त्यो पनि त तथ्य हो नि !
तर क्वारेन्टाइनहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको बनाउन तर्फ सरकारको ध्यान किन नपुगेको ?
हाम्रो ध्यान त्यतापट्टी पनि पुगेको छ । तपाईले उठाएका कतिपय विषयबस्तुहरु म यो क्वारेन्टाइटन अनुगमनको सदस्य पनि हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाटै, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र मलाई तोकिएको छ । म दुरदराजमा गएर पनि आएँ । अनुगनमकै क्रममा काठमाडौं मात्रै होईन, चितवन पुगें । सल्यान, जाजरकोट पुगें । पहाडी जिल्लाहरुमा पनि गएको छु । तर डब्लुएचओको मापदण्ड अनुरुप अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुरुप नभए पनि जहाँ म गए त्यहाँ समस्या थिएन ।
आफु बच्नका निम्ति, अरुलाई बचाउनका निम्ति हामीले तय गरेका मापदण्डहरु आम रुपमा नेपाली नागरिकले, मेरो आदरणिय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले पालना गरिदिन जरुरी छ । जति हामी पालना गर्छौ त्यति रोगको जोखिमबाट हामी पनि बच्छौं र अरुलाई पनि बचाउन सक्छौं ।
तर, क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरु सुविधा नपाएर, परिक्षण नभएर भागेको तथ्यहरु पनि त हाम्रो अगाडी छ नि छैन र ?
भाग्न त यस्तो बेला कहानी धेरै छन् । तपाईसँग कति कुरा भन्न मिल्छन् कति कुरा मिल्दैनन् । क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका साथीहरुको कुरा हामीसँग पनि आउँछ । हामीले पनि त्यहाँ तलका समस्या बुझेका छौं । तर भन्दिन्छन्, के भने किन भोगेको भन्दा क्वारेन्टीनमा सबै व्यवस्था भएन । भन्न सजिलो छ, त्यसकारण यो विषयबस्तु पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि क्वारेन्टाइनको जति व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । हामीले स्थानिय तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । यो यो मापदण्ड अनुरुप काम गर्नु होला भनेर, एउटा कागजै दिएका छौं । त्यो अनुसार अलि नभएको पनि होला । तर पनि हाम्रो क्षमताले हाम्रो श्रोत साधनले भ्याएसम्म गरेका छौं । स्थानीय तहका साथीहरुले जे गर्नुभाछ, एकदम स्रहानिय काम गर्नुभाछ भन्ने कुरा हो मेरो ।
विज्ञहरुले चाँही असारमा र साउनमा धेरै बढ्न सक्छ, धेरै मान्छेहरु सङ्क्रमित हुन सक्छन भनेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा तयारी र मान्छेहरुलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउने उपाय के गर्दैहुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त जोगाउने उपाए हामी गर्दैछौं । तपाइले उठाएका कुरा पनि हो, विज्ञहरुले भनेका कुरा पनि हो र हामीले अनुमान गरेका कुरा पनि हो । भारतबाट आउने नागरिक ५, ६ लाख नेपाल आउन सक्छन् । तेस्रो मुलुकबाट पनि नेपाल सरकारले केही नागरिक ल्याउने कुरा भाछ, तपाईले थाहा पाइसक्नु भाछ । त्यसकारण यहाँ बढ्दै बढ्दैनन् भन्ने होइन । हाम्रो अनुमान पनि बढ्छ भन्ने नै हो । सकेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकारले रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने तिर लाग्ने हो । बढी हाल्यो भने हामीले स्वास्थ्य सामाग्रीदेखि लिएर तपाइले भने जस्तै आइसोलेसन देखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षीत हुने, जनतालाई कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ त्यसमा खट्ने हो । त्यसपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी, केन्द्र सरकारका जनप्रतिनिधी, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधीहरुले अभियानका कुराहरु सन्चालन गर्ने हो । विशेष गरि म फेरी पनि भन्छु, आफु बच्नका निम्ति, अरुलाई बचाउँनका निम्ति हामीले तय गरेका मापदण्डहरु आम रुपमा नेपाली नागरिकले, मेरो आदरणिय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले पालना गरिदिन जरुरी छ । जति हामी पालना गर्छौ त्यति रोगको जोखिमबाट हामी पनि बच्छौं र अरुलाई पनि बचाउन सक्छौं ।
यसको मतलव तपाईहरुले कति जति सङ्क्रमितको परिक्षण गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ज्यूले नै हामीलाई आदेश गर्नुभाछ, ६ लाख परीक्षण गर्नुप¥यो भनेर । अब त्यो सङ्ख्या बृद्धि पनि हुन सक्छ रोगको अवस्था के हुन्छ, परिस्थिति के हुन्छ, क्वारेन्टाइनमा कति मान्छे बस्छन् । बाहिरबाट आउने नेपालीको चाप कति बढ्छ । त्यसले निर्धारण गर्ने अवस्था हो नि ।
हामीसँग स्वास्थ्य सामाग्री प्रयाप्त हुन्छ त्यसरी ६ लाख बढिको परिक्षण गर्न ?
प्रयाप्त हुन्छ भन्दा पनि मैले अघि नै भनिसके नेपाल सरकारको सम्पूर्ण शक्ति यसैमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको छ । सरकारले नेपाली सेना मार्फत छुट्टै खरिद पनि गरेको छ । कतिपय सहयोगबाट आछ । अब स्वास्थ्य सामाग्री त खरिद गर्दै जाने हो नि । हामी त्यो प्रकृयामा अगाडी बढेकै छौं तर सामाग्री पठाकै छौं । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति कोरोनामै केन्द्रीत गरेका छौं ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, १२:२६:००